China High quality ntọala mmiri mmiri zuru oke ntọala nkeonwe onwe waterproof etemeete mmiri mmiri factory na suppliers | Mma Mma
Elu àgwà ntọala mmiri mmiri zuru mkpuchi ntọala onwe labeelu waterproof etemeete ntọala mmiri mmiri
A fechaa ntọala na kasị mkpuchi na matte imecha. Mkpuchi zuru oke na-arụkwa ọrụ iji chịkwaa nchapụta na ịkwado ọdịdị gị ogologo ụbọchị niile. Mana ọ kwụsịghị ebe a: ntọala nke a bụ nke kwesịrị ekwesị maka ụdị nkịtị, mmanụ, nchikota, na ụdị anụ ahụ dị nro.
Ntọala mmiri nwere ụkpụrụ dị mma na nke dị nro, ezigbo mgbatị, dị mfe ịchụpụ, egbula ọnụ, ma na-enye mkpuchi zuru oke. Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè ekpuchi ntụpọ anụ ahụ dị ka akpịrị scars, ọchịchịrị ntụpọ na ihu, ọchịchịrị okirikiri n'okpuru anya, mkpumkpu akpụkpọ ụda na-abawanye pores. Na-eme ka ọdịdị ahụ na-enwu gbaa ma mara mma, na-eme ka anụ ahụ bụrụ ihe okike.
Ntọala mmiri nwere ọrụ moisturizing na mmiri-kpochidoro mmiri. O nwere ihe na-acha ọcha ma na-edozi ahụ ma na-edozi ihe iji chebe akpụkpọ ahụ, kpuchie ezigbo ahịrị na wrinkles, ma mee ka akpụkpọ ahụ gị zuru oke.
Dị nke na-adịgide adịgide, nke na-enweghị mmiri, na ọsụsọ na-enye gị ohere ịchekwa etemeete mara mma na-adịte aka kwa ụbọchị. Nlekọta ntọala dị larịị nwere ike ime ka ihe na-egbuke egbuke, na-enwu gbaa akpụkpọ ahụ ma mee ka akpụkpọ silky dị nro.
Nkebi Aha Ntọala
2. Vegan / Paraben n'efu / mmanụ n'efu
4. Ezigbo, mkpuchi zuru ezu
5. Maka ụdị anụ ahụ niile
2.Q: Etu agba dị ị nwere maka ntọala?
A: Ntọala ntọala niile anyị nwere agba 30 maka ịhọrọ, anyị nwekwara ike ịhazi agba nke gị.
Nke gara aga: N'ogbe ntọala etemeete omenala vegan ntọala ka gị onwe gị logo organic ntọala onwe labeelu
Osote: OEM ihu ntọala ntọala mmiri mmiri N'ogbe omenala onwe labelụ vegan ntọala ịchọ mma
zuru mkpuchi ntọala nkeonwe labeelu
elu mma ntọala mmiri mmiri mkpuchi zuru oke
mmiri na-enweghị ntọala
waterproof ntọala etemeete
waterproof etemeete ntọala
vegan eco etemeete remover mmanụ hydrating onwe ...
vegan highlighter onwe labelụ etemeete omenala h ...
highlighter ntecha na-ere ịchọ mma dịghị logo elu ...
Omenala ntọala onwe labelụ matte foundatio ...
OEM ihu ntọala ntọala mmiri mmiri N'ogbe cus ...
N'ogbe ntọala etemeete omenala vegan founda ...